FBSသည် စင်္ကာပူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲသို့ တက်ရောက်ပါမည်!
FBS အား Suntec Singapore Hall 405 & 406 မှာ သြဂုတ် ၂၅-၂၆ တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံပါ!
FBSမှ စင်္ကာပူရှိ အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲမှာ ရောင်းဝယ်သူများနှင့် ပါတနာများကို တွေ့ဆုံပါလိမ့်မည် - Suntec စင်္ကာပူခန်းမမှာ ၁၂ကြိမ်မြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲ။
မနက် ၁၀နာရီမှ ည၇နာရီထိ FBS ကိုယ်စားလှယ်များသည် ယာယီမဏ္ဍပ် #၀၀၇မှာ မေးခွန်းများအားလုံးကို ဖြေရန်အသင့်ပါပဲ။
သင်တို့အတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ်များ - ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ အမှတ်တရအရာများနှင့် ကျွန်တော်တို့နှင့် အရောင်းအဝယ်အကြောင်း အသုံးဝင်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် အချက်အလက်အတော်များများကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်! ကျွန်တော်တို့ ယာယီမဏ္ဍပ်အား သေချာပေါက်လာရောက်လည်ပတ်ပါ!
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ရောင်းဝယ်သူများကို နောက်ဆုံးပေါ်ဈေးကွက်သုံးသပ်ချက်အပေါ်မှာ အချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်နေစေရန် အထင်ကရ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပွဲလာဧည့်သည်များသည်လည်း ပြည်တွင်းနှင့်ဒေသတွင်းဈေးကွက်အပေါ် ငွေကြေးထုတ်ကုန်သစ်များနှင့် ပစ္စည်းသစ်များအကြောင်း ရှာတွေ့နိုင်ပါမည်။
ပွဲစီစဉ်သူများသည် ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပရန် ကမ္ဘာ့-အဆင့် မိန့်ခွန်းပြောသူများကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
ခုပဲ မှတ်ပုံတင်ပါ – ဝင်ကြေး အခမဲ့ပါ! စင်္ကာပူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးပွဲ၊ သြဂုတ် ၂၅-၂၆၊ ၁၀am – ၇am မှာတွေ့ရအောင်!